Taageero magaca “Iimaam Axmed Gurey” ee loo bixiyey Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Kismaayo | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
Taageero magaca “Iimaam Axmed Gurey” ee loo bixiyey Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Kismaayo	Oktoobar 6, 2008
Ka: Jaaliyadda Beesha Karanle Hawiye ee Norway
Ku: Maammulka Islaamiga ee Degmada Kismaayo
Ku: Dhammaan walaalaha muslimiinta ah ee Reer Kismaayo.
Ku: Bulsha weynta Soomaaliyeed meel ay joogtaba.
Innaga oo ah Jaaliyadda Karanle Hawiye ee dalka Norway waxaam bogaadin iyo duco hawada u mariynaynaa walaalahayaga Reer Kismaayo, gaar ahaan maammulka degmada oo aan uga mahadnaqayno magaca sharafta leh ee ay u xuleen Eelaboorka Kismaayo (Imaam Axmed-gurey Airport).
Beel-weynta Karanle oo si guud igu faraxday magacbixinta Eelaboorka ayaa haddana waxay si hufan idiinkugu gaar yeeleysaa taageero kal iyo laab ah oo ay idiin soo dirayaan Reer Gaasas Garaad oo ku hadlaya magaca durriyadii Iimaam Axmed Ibraahim Gurey iyo magaca Seexawle Karanle.
Imaam Ibraahim Axmed-gurey, wuxuu ku dhashay nawaaxiga caasimaddii hore ee Soomaalida (Harar) horraantii qarnigii 15,aad. Alle ha u naxariistee Axmed Ibraahim markii uu hanaqaadayna wuxuu noqday imaamka muslimiinta Geeska Afrika, daaci iyo abaanduule jebiyey boqortooyadii Xabashida.
Iimaam Axmed taariikh nololeedkiisa kutubtii lagu dhigay waxaa ugu weynaa “Futuuxul Xabash” iyo “Kashf as-sudul can taariikh as-Sumal”. Qorayaasha kutubtan maaddaama ay carab ahaayeen wax yar bay marin habaabiyeen sooyaalka Iimaamka, waxaase badan inta ay wanaajiyeen.
Caddeyn: Sax iyo qalad.
1. Sida uu xusay kutubka “Kashf as-sudul can taariikh as-Sumal” wuxuu sheegayaa in uu iimaamku ku dhashay magaalada Hoobad oo ah dhul ay degaan tolka Balaw ama Bulow.
Waxaa sax ah in uu tolkani yahay Baalow oo ah Seexawle Karanle oo ay degmada Hoobad ka mid tahay dhulku uu ilaa maanta dego.
2. Sidoo kale buuggani wuxuu xusayaa in Iimaam Axmed uu ku biiray ciidamo uu hoggaaminayey Garaad Abuun Cadash.
Waxaa sax ah in magaca garaadka dambe uu ahaa Garaad Abuun Cadaadshe oo ay ka soo jeedaan jilibka Reer Garaad Abuun Cadaadshe. Garaadkani wuxuu ilma-adeer la ahaa Imaam Axmed-gurey oo isagu ahaa Axmed Garaad Ibraahim Maxamed. Markii uu dhintay Garaad Ibraahim oo ahaa Axmed aabbihii ayaa waxaa garaadnimadii beesha la wareegay Garaad Cadaadshe, waxaana ka sii dhaxlay wiilkiisii oo ahaa Abuun Garaad Cadaadshe. Sidaas awgeed Axmed Gurey dadaal badan ayuu u galay dib u hanashada garaadnimadii uu dhaxalka u lahaa ee beesha Karanle, waxaase Alle ku galladay in uu noqday iimaamka muslimiinta Geeska Afrika.
Ujeeddadu waa in aan burinno sheegashada Oromada iyo carabta ee ah in uu Iimaamku iyaga ka soo soo jeedo. Sidaas awgeed qorayaasha Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in ay yimaaddaan dhulkan, si ay u caddeeyaan waxa la daahayo. Ha soo qaateen kutubtii taariikhda si ay ula kulmaan dadka ku abtirsada durrayadii Imaam Axmed Guray, dadkii ka farcamay nimanka ku xusan taariikhda sida Garaad Abuun, Garaad Cadaadshe, Garaad Caamir, Garaad Cabbaas , Garaad Cumardiin iyo weliba faraca labadii wiil ee uu Iimaanku dhalay oo kala ahaa Maxamed Iimaam Axmed-gurey iyo Naaji Iimaam Axmed-gurey.
Talo la gudboon magac bixinta Eelaboorka Imaam Axmed-gurey.
Dawladda dabadhoonka ee Kenya lagu soo dhisay, waagii ay Xabashidu keentay magaalada Muqdisha wixii ugu horreeyey ee ay sameynsay (xasuuqa ka sokow) waa in ay Eelaboorkii Muqdisho u bixisay “Aadan Cadde”. Sababta oo ah siddeeddii sano ee uu Aadan Cadde talada dalka hayey wuxuu si xaqdarro ah hantida qaranka ugu naasnuujin jiray beelaha dega waqooyi bari. Sidoo kale wuxuu garaaddo aanu mudnayn siiyey Cabdullaahi Yuusuf oo ah hormuudka dabadhilifyada. Cabullaahi Yuusuf isaguna wuu gartay in maanta la joogo goortii uu abaalkaas gudi lahaa. Sababtaas weeye tan Eelaboorka Muqdisha loogu bixiyey “Aadan Cadde Internation Airport”.
Haddaba, kolka ay xoogagga xaq u dirirku la wareegaan Muqdisho waxaan ugu baaqaynaa in ay tirtiraan raadka Embegathi iyo xaqdarrada. Waxaan ku talinaynaa in Eelaboorkaas loogu magacdaro Sayid Maxamed Cabdille Xasan oo isaguna ahaa nin abuuray mid ka mid ah taariikhaha ay iskula weynaadaan guud ahaan muslimiintu, gaar ahaanna Soomaalidu.
Sh. Cabdiqani Sh. Xasan Sh. Maxamed